Monday 07, November, 2016
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျပန်နိုင်ငံ ဘုရင်နှင့် မိဖုရားတို့နှင့် တွေ့ဆုံ
Thursday 03, November, 2016
ASEAN London Committee Working Luncheon with the Rt. Hon. Boris Johnson MP
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်က ဂုဏ်ပြု အခမ်းအနားဖြင့် ကြိုဆို
Tuesday 01, November, 2016
Tuesday 25, October, 2016
H.E. U Kyaw Zwar Minn attended the 5/2016 ASEAN-London Committee Meeting on the 25th October 2016.
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ဖိုရမ် (မဲခေါင်ဒေသ) သိုု့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
Saturday 15, October, 2016
Thursday 13, October, 2016
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သြစတြီးယား ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Michael Linhart ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁၄းဝဝ နာရီတွင် နပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်က